Wariye iyo War gure maxaa kala haysta? Qeybtii Labaad | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wariye iyo War gure maxaa kala haysta? Qeybtii Labaad
Xildhibaan Raamsada ayaa gudagalay siduu u gudan lahaa xilkii uu tuurka u ritey guntigana dhiisha isaga dhigay. Xildhibaan Raamsade, waa nin ka tirsanaa shaqaalihii dowladdii kaligi taliyaha ee la burburtey sinnaan la’aan iyo garsoor xumada, markii dambena wuxuu ahaa degel fadhi dowladahii kala duwanaa ee dalka soo marey, midba waxbuu ka soo noqdey.
Xildhibaanku wuxuu 21 sano ku noolaa oo yaqaan meeshii wax uga badhiiqaan ilaa gunta xaadho inuusan ka hadhin, ninba si is leh, waxaa u hillaacay. Xildhibaan Raamsade inuu kaartaduu shirkadda Telefishinka, “TVga Codka Beesha” uga mid noqon lahaa inuu wax walba sameeyo, isla markiiba wuxuu la xidhiidhay JABSHE.
X. Raamsade: ayaa yidhi iigu kaalay gurigii “Fadhiyo Xun” Qorshe iyo qaadba anigaa kuu haya, lacagtii qadadaa waxaan kuugu soo direy Mobilkaaga ee ka dhex eego.
Jabshe: ayaa isaga oo farxad aan la qiyaasi karin ka muuqato, ayuu yidhi; saaxiibbayaal, bacdan garaabada ku jirta cuna, waxaan u casuumanahay nin madaxa waa inoo caawa. Xertiisii ayaa uga mahadcelisey, waxayna la yaabeen, Jabshe oo ahaa: “Xabaali qori saar maahine qori ka qaad ma leh” oo maanta qaadkiisii ku wareejiyey.
Jabshe ayaa yidhi; waxaa igu cuslaan lahaa wax kale, balse, tani waa tan iigu sahlan, waxaanan kaa ballan qaadayaa inaan warar aan horena loo maqal kii maqlaana ka shallaayo inaan keeno, saxda haddaanan qalad ka dhigin, qaladkana aanan sax ka dhigin, oo wax badan “dhegay far” la odhan waxba hay weydiin.
Wuxuu yidhi; Jabshoow, aniguba Jaamacadna kama bixin, aqoon kale oo dheeraadana ma lihi, laakiin, weligay meel wax lagu cunayo kama fogaan Xalaal iyo Xaaraanba, maantana waanigaa xildhibaanka ah, Telefishinka inaad gacantayda soo gelisaan doonayaa, dee fadhigeenuna waa “Fadhiyo xun” Hawshana halkaas ka wad, asxaabtaydana kuwa mucaaradka iyo kuwa wax qasa oo dhanna waa kuu soo tilmaamaya, wixii doonaya inay meel naqaska ku sii daayaan, ka duubo kistaada una duub arrinkooda, dee markaad koox soo diraba waa daba socdaa ee telefoonka sanqadhiisa aan maqlo “Lacagta ku soo shub” ballantana ha ka bixin.
HALKAN KA AQRI QEYBTII KOOWAAD